FITRANGANA ARETINA HAFAHAFA :: Mony iray no nanimba ny ilan-tarehin’ ity tovolahy • AoRaha
FITRANGANA ARETINA HAFAHAFA Mony iray no nanimba ny ilan-tarehin’ ity tovolahy
Tsy afaka mivoaka ny trano fonenany intsony rakotonirina albert na i rivo kely, tovolahy vao iraika amby roapolo taona, noho ny aretina tsy fanta-pototra mikiky ny ilan-tarehiny havia. Ny voalohandohan’ny taona 2017, nisy mony nipoitra teo amin’ny orony ary nopotserina. Nivonto be tao anatin’ny fotoana fohy ary lasa nangidihidy. Nanomboka tsy nahita tory rehefa alina ny andro na amin’ny antoandro fa zara raha matory. ankehitriny, miantso ireo malala-tanana na mpitsabo manana traikefa manokana momba ny fery, afaka handray an-tanana ny fitsaboana azy i rivo kely.
Miaritra fangirifiriana isan’andro. Mpampiditra hira ao anaty finday no asa fitadiavam-bola ataon-dRakotonirina Albert na i Rivo kely, tetsy amin’ny toby fiantsonan’ny fiara fitateram-bahoaka Besarety, tao anatin’ny roa taona. Niroborobo ny fandrosoan’ny tsena, tao anatin’ny fotoana fohy. Mifampindrana fitaovana ny samy mpampiditra hira rehefa maromaro ny mpanjifa. “Rehefa miara-tonga ny mpanjifa dia tsy araka. Mifanome tanana izahay samy mpampiditra hira. Nanomboka teo koa ny tsy nampoizina”, hoy izy nitantara.
Mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, dia miezaka ny hanome tolotra manaraka ny toetr’andro sy tsy handaniany fotoana dia misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny samy mpampiditra hira. Misy ny fifanakalozana fitaovana ampiasaina. “Nony hariva ny andro dia hitako fa nisy mony teo amin’ny oroko. Noezahiko nopotserina avy hatrany. Nanomboka nangidihidy izy, iny alina iny ary tsy nahitako tory izany. Nivonto be ary fotoana fohy dia vaky. Nivoaka nana sy ra tsy nety ritra”, hoy hatrany i Rivo Kely.
Nivonto be ny ilan-tarehiny havia. Tsy afaka nihiratra intsony ny masony havia sady nanaintaina. Noentina nanatona mpitsabo. “Noezahina navoaka ny nana sy ra tao anatin’ilay nivonto. Nitsindrona telo andro nisesy fa vao mainka narary ny andohako sady tsy nitsahatra nivonto hatrany ny tarehiko. Rehefa vaky vao somary nihena kely ny fanaintainana”, hoy hatrany ity tovolahy ity nilaza ny fanombohan’ny fahavoazany.
Niova ny endrika amam-bikan’i Rivo Kely. Nanomboka nivilana ny vavany ary zara raha afaka miteny sy misokatra. Lasa nihakentsona ihany koa ny feony. Ankehitriny, lasa misy lavaka anankiroa ao amin’ny lanilany. “Tao anatin’ny herinandro no nahatsapako io lavaka ao amin’ny lanilaniko io. Ny fanaintainana sy tsy fahitana tory manginy fotsiny”, hoy hatrany izy.
Notetezina avokoa izay lazain’ny olona mahay mitsabo rehetra na ara-medikaly na ara-drazana na raokandro saingy tsy nahitana fanafana. Namela fery sy namoaka fofona io tarehiny io, amin’izao fotoana. “Taiza ny toerana tsy tonganay raha vao misy olona mitondra na manoro anay fa mahasitrana an’io aretina io ? Vola sy fotoana fotsiny no lany hatreto. Tena kivy tanteraka aho satria efa namidy avokoa ny tany, anjara lovako tany ambanivohitra. Fanomezana azo tamin’ny alalan’ny fanaparitahana tamin’ny “Facebook” sisa no antenaina amin’ny fanohizana ny fitsaboana”, hoy Rakotonindriana Robert, rain’i Rivo Kely.
Taorian’ny fiparitahan’ny sary tamin’ny tambajotra serasera dia nisy mpitsabo nanome tanana, maimaim-poana, hanadio ny fery. Tsy afaka manao na inona na inona ilay mpitsabo raha tsy hita ny fototr’aretina. Tokony hanao “scanner” kanefa ny vola enti-manana no tsy misy eo am-pelantanana. Misy dingana maromaro arahina amin’ny fitsaboana. “Isaorako manokana ireo olona efa nanome ary ireo izay mbola hanome. Mbola lavitra ny lalan-kombana amin’ny fitsaboana ka mangataka tolo-tanana amin’ireo olona tsara sitrapo. Ankoatra ny vola sy ny fanomezana dia mangata-bavaka amin’ny olona tsirairay mba hiverenan’ny fahasalamako sy ny tarehiko toy ny taloha”, hoy Rakotonirina Albert na i Rivo Kely, tsy kivy manoloana ny fahavoazany.
Tsy mifady sakafo hohanina izy. Somary sahirana rehefa mitsako vokatry ny lavaka ao amin’ny lanilaniny. “Raha vao mihinana anana sy misotro ronono dia misalebolebo. Tsy afaka mitsako sakafo mafimafy intsony. Potserina avokoa ny ankamaroan’ny sakafo hohanina”, hoy hatrany Rivo Kely.
Manoloana ny fahasahiranana dia manao antso avo amin’ny malala-tanana sy ny olom-pantatra ary ny havana aman-tsakaiza ry Rakotonindriana Robert, rain’i Rivo Kely. Marihina fa efa nodimandry ny reniny. Azo atao ny mandefa ny fanampiana amin’ny laharana 034 02 943 50 na manatona mivantana eny amin’ny trano fonenany eny Ambodivona Andravoahangy tsena, na izay torohevitra azo ifampizaràna hoentina hanasitranana an’ity tovolahy ity.
FIPARITAHAN’NY VALANARETINA :: Maro ireo mpianatra tsy nanao fanadinana noho ny aretina kitrotro
FAHAMAIZANA TENY AMBODIN’ ISOTRY :: Olona roa naratra mafy, trano am-polony potiky ny afo